Izindaba - Yini i-zoom ebonakalayo ne-zoom yedijithali
Kweimojuli yekhamera yokusondezafuthiikhamera ye-infrared thermal imaginguhlelo, kunezindlela ezimbili zokusondeza,ukusondeza kwe-opticalnokusondeza kwedijithali.
Zombili izindlela zingasiza ekukhuliseni izinto ezikude lapho uqapha.I-Optical Zoom ishintsha inkambu ye-engeli yokubuka ngokuhambisa iqembu lelensi ngaphakathi kwelensi, kuyilapho i-zoom yedijithali ibamba ingxenye yenkambu ehambisanayo ye-engeli yokubuka esithombeni nge-algorithm yesofthiwe, bese yenza okuqondiwe kubukeke kukhulu nge-algorithm yokuhumusha.
Eqinisweni, isistimu yokusondeza ye-optical eklanywe kahle ngeke ithinte ukucaca kwesithombe ngemva kokukhulisa.Ngokuphambene nalokho, noma ngabe ukusondeza kwedijithali kuhle kangakanani, isithombe sizofiphala.I-Optical zoom ingagcina ukulungiswa kwendawo kwesistimu yokucabanga, kuyilapho ukusondeza kwedijithali kuzonciphisa ukulungiswa kwendawo.
Ngesithombe-skrini esingezansi, singaqhathanisa umehluko phakathi kwe-optical zoom nokusondeza kwedijithali.
Umfanekiso olandelayo uyisibonelo, futhi isithombe sokuqala sikhonjiswe emfanekisweni (isithombe sokusondeza esibonakalayo sithathwe86x 10~860mm imojuli yekhamera yokusondeza)
Bese, sisetha i-opticalm 4x zoom magnification kanye ne-digital 4x zoom zoom ngokuhlukana ukuze siqhathanise.Ukuqhathanisa umphumela wesithombe kungokulandelayo(chofoza isithombe ukuze ubone imininingwane)
Ngakho-ke, incazelo ye-zoom ebonakalayo izoba ngcono kakhulu kunokusondeza kwedijithali.
Niniibala ibanga lokutholwaye-UAV, indawo yomlilo, umuntu, imoto nokunye okuhlosiwe, sibala kuphela ubude bendawo yokubona.
Isikhathi sokuthumela: Aug-11-2021
imojuli yekhamera yokusondeza 30x Zoom Camera Mdule Ikhamera yokusondeza ende Imojuli Yekhamera Yokusondeza Kwenethiwekhi Ikhamera yezinga lokushisa Ikhamera yokusondeza enkulu kakhulu